Juda kiln -200T/D 3 imveliso...
Iziko lakwaYuda – iitoni ezili-100/...
I-Juda Kiln-Cross icandelo le ...
I-Judah Rotary Kiln- 600t / d × 2 imizila yokuvelisa-iprojekthi ye-EPC
Isishwankathelo seProjekthi kunye neScale Project Overview Ngokumalunga nesicwangciso solwakhiwo seprojekthi yekalika, kucwangciswe ukwakha imigca emi-2 yokuvelisa ikalika esebenzayo, nganye ibenemveliso yemihla ngemihla yeetoni ezingama-600. Ngokweemfuno zokwakha, enye i-rotary kiln enegunya lokuvelisa i-600t / d iya kwakhiwa kwisigaba sokuqala, enye enezinga elifanayo liya kwakhiwa kwisigaba sesibini, ekugqibeleni yenze imveliso ye-2 * 600t / d. iikhini ezijikelezayo. Ngokweemfuno zebhidi...
Indibano yenkqubo yokhuseleko lokusingqongileyo
Iinkqubo zokhuselo lokusingqongileyo Ukuqokelelwa kothuli Uthuli olucoleke ngokugqithisileyo (uthuthu) oluveliswa bubushushu obuphezulu alunyangwa kwaye lukhutshwa ngokuthe ngqo ngaphandle kolungelelwaniso, olungcolisa ngokunzulu imo engqongileyo yeatmosfere. I-soot iqulethe inani elikhulu lezinto ezinobunzima, kwaye ukuphefumla ngokugqithiseleyo kuchaphazela kakhulu impilo yabantu.Kukwakho umngcipheko wokuqhuma kothuli olucolekileyo kakhulu. Ngokweemeko zokusebenza ze-lime kiln evelisa uthuli, i-cyclone dust remover w...
Umqokeleli wothuli lweNkanyamba
Uthuli - oluqulethe i-flue gas kuqala lungena kumqokeleli wothuli lwe-cyclone, amaqhekeza amakhulu othuli awela phantsi kwe-cone ngokujikeleza kwe-centrifugal, ukwenzela ukuba amaqhekeza amakhulu othuli asuswe.
Ingxowa-uhlobo loMqokeleli wothuli
Emva kokuphuma kwi-absorber yegesi ye-flue, i-gas enothuli ingena kwi-bag dust collector. Ngokusebenzisa i-filtration ye-layer ye-bag net, uthuli oluncinci lushiywe kwisikhwama ukufezekisa umphumo wokususa uthuli oluncinci.
Ifilimu yamanzi i-desulphurizer
Uthuli kunye negesi ye-sulphide flue ephuma kwisihluzo sengxowa ingena kwinqaba ejikelezayo.
Idrafti yofakelo lwabalandeli
I-fan eyidrafti esetyenzisiweyo isetyenziselwa ukukhupha igesi ephezulu yokushisa i-flue kwisithando somlilo, esetyenziselwa kakhulu ukungena komoya kunye nomoya kwiibhoyili kunye neziko loshishino.
I-Screw-type Air Compressor
Ngokusebenza kwayo okuphezulu, ukusebenza kakuhle okuphezulu, ukugcinwa kwasimahla kunye nezinye izibonelelo, uhlobo lwe-Screw compressor yomoya ihlala ibonelela ngekhwalithi ephezulu yomoya oxinanisiweyo kuzo zonke iindlela zobomi.
Umgca wokuvelisa i-Juda Calcium hydroxide (kunye nenkqubo yokukhupha i-slag)–Iprojekthi ye-EPC
I-chemical formula yi-Ca(OH)2, eyaziwa ngokuba yi-hydrated lime okanye i-slaked lime.Ngumgubo omhlophe oqinileyo kunye neengqimba ezimbini zamanzi zongezwa.
Umgca wokuvelisa i-Juda Calcium hydroxide (ngaphandle kwenkqubo yokukhupha i-slag)–Iprojekthi ye-EPC
Umgca wemveliso we-calcium hydroxide ophuhliswe yiNkampani kaJuda sele uvavanywa kwaye waphuculwa ngokuphindaphindiweyo kwezesayensi kunye neteknoloji kunye nohlaziyo lobugcisa, oluye lwasombulula izinto ezingalunganga ezahlukeneyo zemveliso yezixhobo ze-calcium hydroxide kwimarike namhlanje.
Inkqubo yokutyumza kaYuda
Isingeniso esifutshane : Xa i-crusher yempembelelo isebenza, i-rotor ijikeleza ngesantya esiphezulu phantsi kwe-motor drive.
Juda powder concentrator
Intshayelelo yezixhobo: Umdidi wokwahlula osebenzayo, uqhutywa kukujikeleza kwe-shaft drive eguquguqukayo, izinto eziphathekayo ngomgubo okhethiweyo wokungena kwigumbi eliphezulu kwiziko legumbi lomgubo.
Inkqubo yokusila kaYuda
Inkcazo yezixhobo: Umatshini okhethekileyo we-calcium hydroxide pulverizing, izinto ezivela kwi-feeder ukuya kumatshini we-calcium hydroxide pulverizing, emva kokulungiswa kwe-vertebra yangaphakathi.
I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo, Ukwenza iCalcium Hydroxide, Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide, Ukwenza iCalcium Hydroxide, ICalcium Hydrooxide Processing, ICalcium oxide Production Line,